ANJANAHARY - ASAN-JIOLAHY : Mpanendaka gaigilahy efa nifonja matetika voasambotra
Nahazoana loharanom-baovao matetika tato ho ato ny trangana asan-jiolahy eny Anjanahary. 25 octobre 2019
Ireo mpody hariva, na koa amin’ny andro mazava manakaiky ny mitatao vovonana iny no tena lasibatry ny fanendahana ny mponina eny an-toerana, ankoatra ny vaky trano misesy lany. Ny vehivavy sendra mandeha irery amin’ny toerana mangina no tena sahin’ireo olon-dratsy. Araka ny tatitra voaray, omaly, dia tovolahy iray manodidina ny 17 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP3 Antaninandro, ny 23 oktobra 2019 lasa teo, tokony ho tamin’ny 11ora antoandro, teny Anjanahary.
Voalaza fa olona roa samy hafa no niharan’ny asa ratsin’ity tovolahy ity tamin’izany ary vehivavy avokoa izy ireo. Lasa tamin’izay fotoana izay ny finday sy ny volan’ny iray tamin’ireo vehivavy voaendaka. Nampandre ny mpitandro filaminana avy hatrany izy ireo ka nidina teny an-toerana ny Polisy miasa ao amin’ny Csp3. Taorian’ny famotorana sy ny fanadihadiana dia voasambotra ilay tovolahy izay fantatra fa nanatanteraka izany asa ratsy izany. Tao anatin’ny famotorana no nahalalana fa efa nifonja matetika noho ny resaka fanendahana hatrany io lehilahy io.